Sawirro naxdin leh ayaa muujinaya saameynta kuleylka adduunka ee Arctic | Saadaasha Shabakadda
Sawirro naxdin leh ayaa muujinaya sida kululaynta adduunku u saameynayso Arctic
Sawir - Timo Lieber
El Arctic Waa mid ka mid ah gobollada adduunka ee dhibaatada ugu badan ay ka soo gaarto cawaaqib xumada ka dhalan karta kululaynta adduunka. Tusaale ahaan waa luminta barafka la abuuray xilliyadan dambe kuleylka sii kordhaya: Grlandnland kaliya, 3000 gigaton oo baraf ah ayaa luntay 2016.
Hadda, sawir qaade Ingiriis ah Timo Lieber, oo khabiir ku ah qaadista sawirrada hawada, ayaa noo soo dhoweynaya xaqiiqadan adag.
Sawirkan, oo si fiican noo xusuusin kara isha aadanaha, ayaa calaamad u ah inay jiraan waxyaabo aynaan si fiican u qabanayn. Heerkulka Arctic wuxuu 2 darajo ka sarreeyaa sida caadiga ah, taas oo laga yaabo inaanay noo muuqan wax badan, laakiin runtii way ka badan tahay inta ku filan barafka inuu ka baxo samaynta madal adag oo adag, una dhalaalayo dildilaaca.
Lieber, kani waa sawirkiisa uu jecel yahay, maxaa yeelay waxay umuuqataa in "isha" ay na eegayso annaga oo la yaaban waxa aan qabaneyno.
Waa tan waxa dhaca markii barafka daciifaa: qaybo yaryar ayaa samaysma illaa dhammaad, haddii aan xaaladuhu is beddelin, dhalaasho, oo kor u qaada heerarka badda adduunka oo fatahaad ka dhigaya xeebaha iyo jasiirado hooseeya.
In kasta oo harooyinku yihiin kuwo qurux badan, haddana xaqiiqda ah inay bilaabeen inay ka soo baxaan Arctic waa wax welwel leh, annaga oo keliya ma aha innaga aadanaha, laakiin sidoo kale xayawaannada ku nool, sida baalasha baarka. Xayawaanadan, markay ka soo baxeen hurdo la'aan, waxay u baahan yihiin inay awood u yeeshaan inay ku dul socdaan dhul adag si ay ugaadhsiga ugaadhsiga u ugaadhsadaan.
Maaddaama kuleylka adduunka uu sii xumaanayo, bears-ka waxay leeyihiin dhibaatooyin aad iyo aad u badan oo raadinta iyo ugaarsashada cuntadooda.
Sawirada, oo si ula kac ah u muuqda, waa inay noqdaan kuwo ka tarjumaya waxa ka dhacaya Arctic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Sawirro naxdin leh ayaa muujinaya sida kululaynta adduunku u saameynayso Arctic
Meelaha Cimilada ee Dunida